Global Voices teny Malagasy » IndiBlogger.in : Ny toetry ny tontolon’ny blaogy indiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jolay 2018 13:24 GMT 1	 · Mpanoratra Gaurav Mishra Nandika (fr) i Claire Ulrich, imanoela fifaliana
Sokajy: India, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Vao haingana no nozarain'i Renie Ravin ao amin'ny IndiBlogger.in  [amin'ny teny anglisy toy ireo blaogy rehetra voatanisa] tamintsika ny vaovao mahaliana mikasika ireo blaogy 7895 resahan'ny IndiBlogger.in. Vavahadin-tserasera tena mavitrika be anà blaogy indiana ny IndiBlogger.in, miaraka amina endri-javatra tsara toy ny fanangonana isaky ny lohahevitra, fandaharana ireo blaogy mifanaraka amin'ny lazany (IndiRank ) ary fitaovana iray fandaminana hatsikana (andiana lohahevitra iombonana na tenifototra any amin'ny blaogy), IndiVine .
Nangoniko ireo angona manandanja ho ao anatina fàfana iray mampiseho ny toetry ny tontolon'ny blaogy indiana , ao amin'ny IndiBlogger.in  :
Ny The Indian National Interest , Digital Inspiration  sy ny Gauravonomics  no blaogy telo voatsidika indrindra ao India, araka ny algoritma IndiRank n-n'ny IndiBlogger.in. Na izany aza, mety hitondra any amin'ny fahadisoana izany satria maro ireo blaogera indiana tena vakiana im-betsaka indrindra no mbola tsy nanoratra ny blaoginy tao amin'ny IndiBlogger.in. Mihevitra aho fa tsy tokony hijanona amin'ireo blaogy voasoratra ao amin'ny sehatrasany ihany ny IndiBlogger.in ary tokony haka ohatrana blaogy indiana araka izay vitany, atomboka amin'ireo blaogy rehetra ao amin'ny angom-blaogy indiana an'ny Amit Agarwal . Afaka hitaky ny fiahiana ireo blaogy ireo any aoriana raha mahaliana azy izany. Hahafahana mamaha haingana ny olan'ny fahazoana antok'ireo fandaharana ireo izany. Mihevitra koa aho fa ho tsaratsara kokoa ny ho mangaraharaha tanteraka momba ny masontsivana ao anatin'ity fandaharana ity, toy ny fandaharana AdAge Power 150. 
Efa nanokana lahatsoratra ho an'ny angondrakitra ao amin'ny IndiBlogger.in ihany koa i Maneesh Madambath, ao amin'ny WATBlog .
Ao amin'ny andiany manaraka mikasika ny toetry ny tontolon'ny blaogy indiana ao amin'ny IndiBlogger.in , hahaliana ny hanadihady ny fivoaran'ireo antontanisa ireo mandritra izany fotoana izany. Mety hahaliana koa ny hampiasa ny angondrakitry ny IndiBlogger.in mba hanadihadiana ireo tambajotra, amin'ny fampiasana fitaovana toy ny Linkfluence .
Raha maniry ny hahazo vaovao bebe kokoa mikasika ity fanadihadiana ity, na hanolotra angondrakitra hafa ho sintonina izay mety hahaliana, na koa hanampy anay amin'ny fanadihadiana vaovao, mifandraisa amin'i Gaurav Mishra  na i Renie Ravin  , na mamelà fanehoankevitra etsy ambany.
Nozaraina tao amin'ny blaogy Gauravonomics  ihany koa ity lahatsoratra ity, blaogiko momba ny tambajotra sosialy sy ny fiovàna sosialy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/29/123453/
 Renie Ravin ao amin'ny IndiBlogger.in: http://indiblogger.in/
 ny toetry ny tontolon'ny blaogy indiana: http://www.flickr.com/photos/gauravonomics/3539631046/
 Ny The Indian National Interest: http://acorn.nationalinterest.in/
 AdAge Power 150.: http://adage.com/power150/
 Maneesh Madambath, ao amin'ny WATBlog: http://www.watblog.com/2009/05/18/state-of-indian-blogosphere-indibloggerin-throws-some-interesting-numbers/